ओझेलमा रापानी झरना – Sky News Nepal
ओझेलमा रापानी झरना
३ माघ २०७७, शनिबार १५:१० मा प्रकाशित
स्काई न्यूज / माघ ४,जाजरकोट ।
आहा ! कति सुन्दर झरना ! देख्ने सबले यसै भन्छन् । सबैले मोबाइल निकालेर तस्बिर र सेल्फी खिच्न थाल्छन् । झरनाले धेरैको मन लोभ्याएको छ । जिल्लाकै सबैभन्दा आकर्षक मानिने बारेकोट गाउँपालिकामा रहेका झरना आवश्यक प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेका छन् । बारेकोट पदमार्ग नजिकै रहेका तीन वटा झरनाको प्रवर्द्धन गर्न सके जिल्ला कै आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बारेकोट–८, लैखम गाउँबाट करिब १ किलोमिटर दक्षिण पूर्वको रापानी खोलामा तीन वटा झरना छन् । ती झरनाको बनावट पनि अनौठो खालको रहेको छ । एकै स्थानमा रहेका झरना आवश्यक प्रचारप्रसार नहुँदा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ ।सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकारको गतिलो ध्यान नपुग्दा झरना क्षेत्रको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । झरनाको आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न सके पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । माथिबाट सिधा बगेर झरेको पानीले झरनाको थप आकर्षण बढाएको छ । झरनाको दृश्य हेरिरहौँ लाग्ने खालको रहेको छ । यहाँ तीन वटा झरना रहेका छन् । तल्लो झरना, बिचको झरना र माथिल्लो रापानी झरना रहेका छन् ।
छेउमै कलकल बग्ने नलसिंहगाड खोलाको सुन्दरतासँगै खुल्ला अनि वरिपरि हरिया पहाडहरूको बीचमा रहेको झरना क्षेत्रलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट एवम् आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने झरना क्षेत्रको अवलोकन गर्न पुग्नेहरू बनाउछन् । शनिबार तथा बिदाको समय झरनामा पुगेर फोटो खिच्न रमाउने युवा युवतीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै हुने गरेको लैखमका रामचन्द्र शर्माले बताए । झरनासम्म पुग्नका लागि सहज पदमार्ग बाटो समेत छैन । झरना क्षेत्रको अवलोकन गर्न सहज पैदल मार्ग नहुँदा पुग्न समेत मुस्किल पर्ने गरेको शर्माको भनाइ छ । झरनासम्म पुग्नलाई गतिलो पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले सहज रुपमा झरना अवलोकन गर्न टेवा पुग्ने स्थानीय रुद्र खत्रीले बताए । करिब ७ सय बर्ष पहिले खगेनकोटी राजा सिकार खेल्न गएको बेला उक्त झरनाको पानी पिएको किंवदन्ती छ । राजाले पिएको पानी भएको हुँदा यस झरनाको नाम रापानी झरना रहन गएको खत्रीले बताए । यहाँ सामान्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सके पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने विश्वास छ, खत्रीले भने । झरनाको प्रचार र प्रवर्धन गर्नका लागि गाउँपालिकाले पनि पहल गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।
बारेको गाउँपालिका क्षेत्रमा ओझेलमा रहेका थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू र तिनीहरूको प्रचारप्रसारमा गर्न गाउँपालिका लागि परेको छ अध्यक्ष शाहले बताए । लैखमको रापानी झरना हेर्न गाउँका स्थानीयहरू झरना स्थल पुगेर रमाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रको विकास खास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनु पर्नेमा स्थानीयको जोड रहेको छ । समुद्री सतहदेखि करिब १ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा रहेका तल्लो झरनाको लम्बाई झण्डै १ सय मिटर, बिचको २ सय र माथिल्लो झरनाको १ सय ५० मिटर रहेको छ । झरना नजिकैबाट छर्लङ्ग देखिने बारेको प्रवेश गर्दाको खाँरागल्छी, झरनाको तलबाट सुसाउँदै बग्ने नलसिंहगाड खोला, वरिपरि रहेको हरियो वन जङ्गलले यस क्षेत्रको सुन्दरता अझै बढाएको छ । हिमाली जलवायुको सामीप्य महसुस हुने झरना क्षेत्र वरिपरिका वनमा कस्तुरी मृग, घोरल, बँदेल, झारल, चिरकालिज, कालिज, डाँफे जस्ता विभिन्न जङ्गली जनावरहरू तथा पन्छीहरू देख्न सकिन्छ ।यहाँ सामान्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सके पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ । झरनाको प्रचार र प्रवर्धन गर्नका लागि गाउँपालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । ओझेलमा परेका यस्ता क्षेत्रको पहिचान खोजी तथा विकास गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सके सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन भ्रमण वर्षले समेत सार्थकता पाउने देखिन्छ ।